Mahdi Cismaan Buuri Oo Beenisay In Biyo La’aani Ay Ka Jirto Berbera | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Mahdi Cismaan Buuri Oo Beenisay In Biyo La’aani Ay Ka Jirto Berbera
Published on August 30, 2016 by sdwo · No Comments
Hargasya (SDWO.com): Wasaaradda biyaha Somaliland ayaa beenisay in wax biyo la’aan ah ay wakhtigan ka taagan tahay magaallo xeebeedka Berbere, taasi oo la sheegay in mudooyinkii danbeeyay ay dadweynuhu ka cabanayeen biyo yaraan soo waajah-day.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda khayraadka biyaha Mahdi Cismaan Buuri, oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in aanay jirin wax biyo la’aan oo haatan ka taagan magaaladda Berbera, balse muddo kooban uu xidhmay Beebkii biyaha magaaladda uga keenayay degaanka Dubaar, isla markaana ay si deg-deg ah uga hawl-galeen kana shaqaysiiyeen.
Mahdi Cismaan Buuri, waxa uu tilmaamay in sababtii keentay biyo yaraanta maalmo kooban laga dareemay Berbera ay ka dhalatay kadib markii ay Xayaabo xidhay Beebka biyaha ka keena degaanka Dubaar oo ah halka ay biyuhu uga yimaadaan magaaladda Berbera, isagoo xusay markii danbe ay shaqeeyeen sidii beebkaasi xidhmay loo furi lahaa.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Ma jirto biyo la’aan khatar ah oo taagan Berbera, balse waxa jirta in Beebkii biyaha ee ka imanayay Dubaar ayaa Owd-may. Waayo marka uu Beebku muddo shaqeeyo Xayaab ayaa ku dhalanaya, Xayaabkiina waxa uu isku bedelayaa Shacaabi, Shacaabigaasina waxa uu marka danbe gaadhayaa in uu Beebkii xidho”.
Wuxuu sheegay in markii lagu soo wargeliyay in Beebkii biyaha ka keenayay Dubaar uu xidhmay in ay markiiba ka hawl-galeen, iyadoo Beebkaasi uu hadda si caadi ah u shaqaynayo. “Markiiba waa la ila soo hadlay, aniguna waxaan la hadlay isu-duwihii wasaaradda biyaha ee gobolka Saaxil, isla markiibana wuu ka jawabay, waxaanan filayaa in arrinkaasi uu dhamaaday. Biyo la’aani may jirin ee Beebkaasi ayaa Oodmay, Beebkiina waanu furnay, biyihiina way shaqaynayaan imika”ayuu yidhi Mahdi Cismaan Buuri.
Sidoo kale wasiir ku xigeenka biyaha waxa uu ka hadlay sida ay ka wasaarad ahaan xil weyn isaga saaraan in aanay mar qudha biyuhu ka gu’in magaaladda Berbera, maadaama oo ay tahay magaallo-xeebeed, isla markaana ay ka dhoofaan xoolaha.
Waxaanu yidhi “Dhawaan ayaan anigu tegay Berbera, waxaanan soo furay 180 guri oo uu madaxweynuhu amray in halkaa laga dhiso, kuwaasi oo ay fulisay dawladda hoose ee Berbera. Anaguna haddii aanu nahay wasaaradii biyaha waxaanu gelinay guryahaasi Beebkii biyaha siin lahaa.
Markaa wax biyo la’aan ahi maanta kama jiraan Berbera, mudnaantayadda koowaad-ba waa Berbera. Sababtuna waxay tahay, inagu waxa ugu badan ee aynu dhoofinaa waa Adhiga, halka Adhiga laga dhoofiyaana waa Berbera, xoolihii aynu dhoofinaynay-na waa Caws iyo biyo ku nool”.
Isagoo hadalkiisa sii watay-na waxa uu yidhi “Markaa haddii xoolihii la dhoofinayay ay biyo waayaan, ma suurto-gelayso in aynu dhoofino. Maxaa yeelay, inta Maxjaradda ku jiraan waxay u baahan yihiin biyo, marka ay xooluhu markabka saran yihiin biyo Sahay ah ayaa loo sii saaraa, sidaas darteed mar-qudha kama maar-mayaan biyaha”.
Isku Soo wada duuboo, hadalkan wasiir ku xigeenka biyaha ayaa ka danbeeyay kadib markii ay maalmahan dadweynaha ku nool magaaladda Berbera ka soo yeedhaysay cabasho la xidhiidha in aanay xaafado ka mid ah magaaladaasi wax biyo ah helin maalmo badan.
Waxaana jirtay in shalay ay idaacadda BBC laanteedda Af-soomaaliga baahisay war ku saabsanaa in magaaladda Berbera ay xiligan ka taagan tahay xaalad biyo la’aaneed oo aad u daran, iyadoo lagu jiro wakhtiga Xagaagga ah, isla markaana uu si aad u sii kordho kulaylku.